Eedeysaneyashan baaris loo diray ayaa gacanta lagu dhigay iyagoo ku jira gaari dowladeed.
NAIROBI, Kenya – Booliska gobolka Garissa ee Kenya ayaa Sabtida maanta ah gacanta ku dhigay, baaritaanna ku bilaabay 12 qof oo Soomaali ah, sidda uu baahiyey telefishinka maxaliga ah ee Citizen Tv.
Sidda laga soo xigtay warbixinta, shaqsiyaadkan aan wadan dukumiintiyo muujinaya jinsiyadahooda ayaa la qabtay iyagoo ku dhex-jira gaari dowladeed gaar ahaan nooca loo yaqaano Land Cruiser.
Dhamaantooda waxaa laga soo xiray buundada Garissa-Tana. Qabashooda waxay timid markii ciidamadu dalbadeen in ay eegaan hadii shaqada ay wadaan ay tahay mid ogolaanshiyo rasmi ah ka haysata dowlada.
"Saraakiisha kadib waxay ogaadeen in aqoonsiga la siiyey uu ka duwan yahay midka gaariga dhabta ah, waxay kaloo ogaadeen in gaariga uu ka diiwaan-gishan yahay Wasaarada Horumarinta Magaalooyinka Garissa," ayuu baahiyey Tv-ga oo soo xiganaya illo wareedyo dhanka amniga ah.
La tuhunsaneyaasha oo baaris ay ku socoto ayaa laga doonayaa in ay caddeeyaan goobta ay kusii jeedeen iyo cidda hogaamineysa.
Horaantii bishaan September, ciidanka Kenya ayaa fashiliyey shabakad ka ganacsatada dhoofinta dadka, kuwaasoo tarxiilayey 16 ruux isla markaana lagu qabtay wadada isku xirta degaanada Marsabit-Isiolo.
Shaqsiyaadkaas oo kala saarnaa saddex gaari oo kala duwan ayaa la sheegay in ay dhoofinayeen lix eedeysane oo haatan xabsi ku jira.
Kenya ayaa kamid ah wadamada caalamka oo ay ku badan yihiin kiisaska dhoofinta dadweynaha. Mas'uuliyiinta waxay mar walba sheegaan in ay wax ka qabanayaan, haddana way isa soo tarayaan dambiyadan.
GARISSA, Kenya - Ugu yaraan 11 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen Shil gaari oo ka dhacay Maanta oo Talaado ah wadada Bangal oo ku taalla gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Taliyaha Booliska gobolka Tana River, Walter Aliwa ayaa xaqiijiyay in shilka ...
Afrika 03.07.2019. 19:52